Sava : nojerena manokana ireo zokiolona | NewsMada
Sava : nojerena manokana ireo zokiolona
Nomarihina tany amin’ny faritra Sava ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny zokiolona ny faran’ny herinandro teo. Nitsimbinana manokana ireo ray aman-dreny sy ireo fianakaviana lasibatry ny rivodoza Enawoo farany teo ny hetsika.
Nisy ny fizarana vatsin’ankohonana 60.000 Ar isan-tonkantrano ho an’ireo zokiolona 500 avy amin’ny distrika efatra tao Andapa.
Nitohy tany Antalaha sy Vohémar ny asa sosialy ary nofaranana tany Sambava avy eo. Natsangana ny foibe hahafahan’ireo zokiolona miala voly. Novatsina fitaovana toy ny fahitalavitra sy kilalao iraisana ihany koa ireo foibe telo tamin’ny tanàna hafa manodidina.
Niaraha-niasa tamin’ny Capa na ny vondrona naman’ireo zokiolona izany famatsiana fitaovana izany. Ahitana dokotera sy mpiasan’ny fahasalamana ao anatin’ity Capa ity.
Nilaza ny minisitry ny Mponina fa handalo eo amin’ny filankevitry ny governemanta amin’ny herinandro faharoan’ity volana oktobra ity ny lalàna nasiam-panavaozana momba ny fiahiana ny zokiolona.
Hampahafantarina ny solombavambahoaka sy ny loholona izany amin’ny fivorian’izy ireo.
Amin’izao fotoana izao, 10%-n’ny Malagasy ihany no manana fiahiana ara-tsosialy. Voatery miasa mandra-pahafatiny hamelomana ny tenany ny 90%. Mifototra indrindra amin’ny fiahiana ireo zokiolona ny fanavaozana ny lalàna amin’izao fotoana izao.